မြန်မာငွေ သိန်း သုံးဆယ်ကျော်သုံးပြီး Samsung Galaxy Fold ဝယ်မယ့်အစား တခြားဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ? - PX
မြန်မာငွေ သိန်း သုံးဆယ်ကျော်သုံးပြီး Samsung Galaxy Fold ဝယ်မယ့်အစား တခြားဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ?
Samsung Galaxy Fold ဟာဆိုရင် € 2000 ကျော် (မြန်မာငွေ သိန်း ၃၀ ကျော်) ကျသင့်တဲ့ အရမ်း အရမ်း မိုက်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်မှာကတော့ အထူးအထွေ ပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Samsung Galaxy Fold ဟာ April 26 ရက်နေ့မှာ စတင်ရောင်းချတော့မှာ ဖြစ်ပြီး အခုမှာတော့ အဲ့ဒီ သိန်း ၃၀ ကျော်ကို အသုံးပြုပြီး ဘာတွေဝယ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာကို အပျော်သဘောနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ကြရအောင်လား။ အပျော်သဘောနဲ့ ဆိုတော့ Huawei Mate X လို € 2299 တန်ဖိုး နဲ့ဆိုရင် ဘယ်လောက်ထိ ထပ်ပြီး upgrade လုပ်နိုင်ဦးမလဲဆိုတာကို နှိုင်းယှဉ်ပေးဦးမှာပါ။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ အချက်ကနေ စကြည့်လိုက်မယ်နော်.. Snapdragon 855 သုံးထားတဲ့ device မျိုးကို သုံးချင်တာဆိုကြပါစို့.. ဒါဆိုရင်တော့ Xiaomi မှာ အဖြေရှိပါတယ်။ Mi9ဟာဆိုရင် € 499 ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပြီး RAM6GB , internal 128 GB နဲ့ ရောင်းချနေတာဖြစ်လို့ € 2000 ဖိုး ဆိုရင် Mi9လေးလုံးလောက် ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ € 2299 တန်ဖိုး အထိ ဆိုရင်တော့ Mi9လေးလုံး ဝယ်ပြီး ပိုတဲ့ € 250 လောက်နဲ့ Redmi Note7တစ်လုံးတောင် ထပ်ဝယ်နိုင်ဦးမှာပါ။
တကယ်လို့ Samsung fan မို့လို့ Samsung ပဲသုံးမယ် Galaxy family ထဲက Flagship ဖုန်းတွေကိုပဲကြိုက်တယ် တရုတ်ဖုန်းတွေ မဝယ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း Galaxy S10+ နှစ်လုံးဝယ်ပြီးကျောချင်းကပ်သုံးမယ်ဆိုရင် Fold လုပ်ပြီး သုံးရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကိုပါ ပေးနိုင်ဦးမှာပါ။ တကယ်လို့ Huawei Mate X လို မျိုး € 2299 အထိ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဝယ်ထားတဲ့ Galaxy S10+ နှစ်လုံးထဲက တစ်လုံးကို Storage 512 GB အထိ upgrade လုပ်လိုက်လို့ ရပါတယ်။ Model တူ ဖုန်း နှစ်လုံး ဝယ်ဖို့ပဲ ရွေးချယ်စရာ ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Samsung Galaxy Fold ဟာ tablet တစ်လုံးလိုရော ဖုန်းတစ်လုံးလိုပါ တပြိုင်တည်းခံစားရစေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Galaxy Tab S4 LTE တစ်လုံးနဲ့ 5G အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Galaxy S10 တစ်လုံးကို ဝယ်သုံးလိုက်လို့လည်း ရနိုင်သေးတာပေါ့။
Screen ကြီးကြီး အသုံးပြုရတာကို ကြိုက်တာဆိုတဲ့ သူတွေကတော့ ပိုကြီးတဲ့ screen ကို ပိုကြိုက်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ Samsung Galaxy Fold တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးအတိုင်းဆိုရင် နောက်ဆုံး Q60R series ထဲက ၆၅ လက်မ Samsung QLED TV တစ်လုံးကို ချက်ချင်း ကောက်ဝယ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ Huawei Mate X တန်ဖိုးနဲ့ ဆိုရင်တော့ TV အသစ်တစ်လုံးတင် မကပဲ Netflix မှာ နှစ်နှစ်စာ Subscribe လုပ်ပြီး Netflix N Chill နိုင်ဖို့ရာ အတွက် Snacks တွေပါဝယ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တချို့တွေပြောသလို Smartphones တွေနဲ့ ဝေးရာ Digital ကမ္ဘာကို ပြေးထွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း €2000 ဆိုသည်မှာ ဈေးအတန်အသင့် ရှိတဲ့ Tour agency နဲ့ဆိုရင် ဘာလီကျွန်းကို ၃ ညအိပ် ၄ ရက် ခရီးအသွားအပြန် ၃ ခေါက်လောက်လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ € 2000 ဆိုတာဟာ ဘဝမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေ အများကြီးကို ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ငွေပမာဏဖြစ်တာကြောင့် တကယ်လို့သာ အခုချိန်အိတ်ကပ်ထဲ €2000 (မြန်မာငွေ သိန်းသုံးဆယ်ကျော်) သာ ရှိမယ်ဆိုရင် Samsung Galaxy Fold ဝယ်မလား ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးမလဲဆိုတာကို Comment မှာ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့လို့ရပါတယ်။
လာမဲ့ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ Meizu 16s နဲ႕အတူ Meizu 16T Gaming phone ကိုပါမိတ္ဆက္ေပးဖြယ္ရွိ
iPhone ေတြမွာ in-screen Fingerprint function ထည့္သြင္းနိုင္ဖို႕အတြက္ Qualcomm နဲ႔ Apple အတူတကြ လုပ္ေဆာင္